Olee otú Iji Mkpọ N'ihi A Train njem gafee Italy | Save A Train
Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Olee otú Iji Mkpọ N'ihi A Train njem gafee Italy
ala, anya nkecha na-adịghị nke ukwuu arọ akpa. Nke a bụ otú abịa maka a ụgbọ okporo ígwè njem gafee Italy.
Olee otú abịa maka a ụgbọ okporo ígwè – Clothing, akpụkpọ ụkwụ, na ngwa
Mgbe ole ejegharị ejegharị site ụgbọ oloko site Italy, ị ga-achọ na-gị na ejiji game ike. Ma kama mbukota gị niile ọkacha mmasị uwe, họrọ stylishly, ọma-bee ochie na accessorize na obi ike na nkwupụta iberibe. Ọmụmaatụ, abịa maka a ụgbọ okporo ígwè na njem a na-ruo eruo black jeans, t-Chiefs na Polo n'olu anya chic naanị. N'ihi na a ukporo ụbọchị anya, ụzọ na sneakers na a denim jaket. N'abalị, tinye iwu flat na a mpempe na nkwupụta ọla.
Jide n'aka na-abịa a nnukwu ịchafụ. Nakwa dị ka yi maka ịhụnanya ma ọ bụrụ na ọ bụ chilly ma ọ bụ itinye flair gị na ekike, a nnukwu ịchafụ nwere ike na-eme ka a blanket mgbe ị zuru ike na gị ụgbọ okporo ígwè. Ị pụrụ ọbụna iji ya dị ka a picnic blanket ma ọ bụ a wuru beach towel.
Mgbe ọ na-abịa akpa, ka otù onye nnukwu ubu akpa na pụrụ ijide shopping ma ọ bụ beach dị mkpa. Ị ga mkpa a azu paaki ma ọ bụ cross-aru akpa maka ụbọchị na-ụbọchị njem nleta na-eme na otu obere, iwu ipigide maka mgbede, n'ihi ya, o ziri ezi mgbe ị na-abịa maka a ụgbọ okporo ígwè na njem.
nlekọta, mma na ngwaahịa, na ọgwụ
N'ihi na ụgbọ oloko njem, ọ bụ ọnụ ahịa ịzụ njem-sized abịa maka a ụgbọ okporo ígwè na njem niile gị mma na ngwaahịa ma ọ bụ a njem akpa-emekwa ka unu nwere ike jupụta na gị onwe gị na ngwaahịa. Ọ bụrụ na gị na njem bụ ogologo oge karịa a izu ma ọ bụ abụọ, atụle ịzụ ihe ncha ntutu na ịsa jel n'oge gị njem, kama na-eweta a na-sized akpa gị akpa – agbakwunye arọ na-ewere ohere. Ị nwekwara ike ịrịọ maka samples na mpaghara gị mma counter. Ha ga-enwe ike nye gị nta nsụgharị nke gị niile dị mkpa, ka mascara, ọbara na abalị ude.
Mgbe ọ na-abịa etemeete, Paré gị na-eme ala gị njem. A ụba moisturizer, a ime ihiere na ike okpukpu abụọ dị ka eyeshadow na mascara ga na-ị selfie-njikere. I nwekwara ike ga-tinyere a multi-nzube ngwaahịa ka vaseline ma ọ bụ asatọ-hour ude, nke nwere ike ịbụ egbugbere ọnụ balm, a Highlighter ma ọ bụ onye na-ufiop moisturizer.
Echefula gị ọgwụ ọgwụ, nakwa dị ka a obere mbụ enyemaka gaa. ọgwụ mgbu, ọgbụgbọ ọgwụ na gbalaga-enyere na-adịghị-elu nke ukwuu ohere, na ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ọ bụla ọzọ kpọmkwem, ị ga-enwe ike ịhụ na ọ na ihe Italian ahịa ọgwụ ma ọ bụ ọgwụ ụlọ ahịa.
Entertainment, electronics, na akwụkwọ
A ụgbọ okporo ígwè na njem bụ a zuru okè oge ịchụkwudo na-agụ, Otú ọ dị, akwụkwọ na-keukwu na arọ. A Kindle, mbadamba nkume ma ọ ama na a na-agụ ngwa bụ a oké ụzọ ngwaahịa elu na-agụ ihe mgbe ọ ka edebe akpa gị ìhè n'ihi ya, jide n'aka na-abịa maka a ụgbọ okporo ígwè ịkwada gị mbadamba. I nwekwara ike ibudata audiobooks na-enwe echiche gị window mgbe na-ege gị akwụkwọ.
Tinyere gị mkpa anụ ahụ njem akwụkwọ, ị nwekwara ike ile foto ma ọ bụ na ike iṅomi mkpa akwụkwọ na email mbipụta ka onwe gị. nke ahụ ụzọ, ma ọ bụrụ na gị na ama ma ọ bụ mbadamba bụ adịghị, i nwere ike abanye n'ime gị email remotely ma nweta akwụkwọ gị mkpa.
Brussels na Bonn Ụgbọ oloko
Antwerp na Bonn Ụgbọ oloko
Halle na Bonn Ụgbọ oloko
Ghent na Bonn Ụgbọ oloko
n'otu ntabi anya akpa
Mgbe na-ewere ihe -eji ụgbọ okporo njem, ị ga-mkpa icheta abịa maka a ụgbọ okporo ígwè gị niile dị mkpa na a obere akpa ke gị azu paaki ma ọ bụ cross-aru bag. Gụnye isi nlekọta ka a atu na mado, hairbrush ma ọ bụ mbo, ọdịdị ihu ehichapụkwa, na moisturizer. Ọ bụrụ na ị na-na na a ìhè sleeper, ị pụrụ iji tinye earplugs na a na-ehi ụra nkpuchi gị n'otu ntabi anya akpa.
Ị ga-mkpa ụfọdụ fechaa pajamas, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-ahọrọ, ala uwe i nwere ike na-ehi ụra na, dị ka track ogologo ọkpa ma ọ bụ leggings na a vest ma ọ bụ a tank n'elu na zoro ezo support. Echefula gị nnukwu ịchafụ, nke ị nwere ike tụgharịa na-eji dị ka a ohiri isi ma ọ bụ ihe mmezi blanket.
Njikere abịa maka a ụgbọ okporo ígwè eme njem ma ọ bụ akwụkwọ gị ụgbọ okporo ígwè eme njem gburugburu Italy? Jide n'aka na ị gaa na Save A Train ebe website maka ụgbọ oloko tiketi ntinye akwụkwọ maka European njem na nke kacha mma ahịa. nweta ịgagharị!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/how-to-pack-for-a-train-trip-across-italy/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
Ọ bụrụ na ị chọrọ inwe obiọma ọrụ gị, i nwere ike na-eduzi ha kpọmkwem n'ime anyị search peeji nke. A njikọ, ị ga-ahụ anyị kasị ewu ewu ụgbọ okporo ụzọ gasị – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, na i nwere ike ịgbanwe / pl na / fr ma ọ bụ / ya na ndị ọzọ na-asụ asụsụ.
#pack ụgbọ okporo ígwè Atụmatụ traveltips
Car Travel Tips, Zụọnụ Ndụmọdụ, Travel Europe